Majaajiliiste Ilkacase oo ku geeriyooday Muqdisho (Muxuu sababsaday?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooda Majaajalistaha caanka ah ee Soomaaliyeed, Cabdi Maxamuud Ilkacase oo ka tirsanaa Hobolaada Waabari.
Maareeye ku xigeenka Tiyaatarka Qaranka, Cabdikariim Jiir ayaa sheegay in Majaajliste Ilkacase laga heley Meydkiisa guriga oo ka deganaa Muqdisho duhurnimadii shalay.
Xaaladda caafimaad ee Cabdi Maxamuud Ilkacase ayaa la sheegay iney aheyd mid wanaagsan, hase yeeshee ay ku timid geeri degdeg ah, sida uu shegay C/kariim Jiir.
“Ma ogin sababta geeridiisa, balse caafimaadkiisa wuxuu ahaa markii iigu dambeysay mid wanaagsan, balse geeridu waa xaq, naxdin ayayna nagu noqotay,” ayuu abwaan C/kariin Jiir ku yiri hadal uu warbaahinta siiyay.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Ilkacase uu u dhintay waxyaabo uu cabay, iyadoo ruux kale walxahaas la cabay uu la geeriyooday, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Booliska, ayna wadaan baaritaan.
C/llaahi Xiris oo ka tirsan madaxda TV Universal ee magaalada Muqdisho oo uu Ilkacase ka shaqeynayey ayaa sheegay in labo qof loo xiray tuhun la xiriira iney ku lug leeyihiin dareerihii uu cabay Ilkacase ee uu u geeriyooday.
Ilkacase ayaa ka mid ahaa Majaajiliistayaasha fara ku tiriska ahaa ee sanadihii colaadda ku noolaa magaalada Muqdisho.
Majaajiiliste Ilkacase ayaa noqonaya majaajiliistii u dambeeyay ee ku geeriyooday Muqdisho afartii sano ee u dambeysay iyadoo sanadkii 2012 la dilay Majaajiliiste Marshaale, halka sidoo kale ay xanuuno kala duwan ugu geeriyooday Cali Hiiraan iyo Qowdhan. Waxaa sidoo kale xilligaas ka hor Muqdisho ku geeriyooday C/llaahi Amiin Rooble (Ow-Kuu-kuu).
Somalia:Young Politicians of Somalia against gerontocracy